कहाँ जान्छन् किशोरी ? – www.agnijwala.com
कहाँ जान्छन् किशोरी ?
काठमाडौं, १ चैत – गत माङ ५ गते बाह्रबिसे नगरपालिका ८ जम्बुपारिकी २१ बर्षीया कमला दाहाल एकाएक माइतबाटै गायब भइन् । दुई दिनसम्म परिवारले व्यापक खोजी गर्यो । कतै नभेटेपछि उनीहरु निराश छन् ।
कमला हराएको दुई दिनपछि बाह्रबिसे कर्थलीकी २६ बर्षीया विमला तामाङ पनि त्यसरी नै हराइन् । सधैँझै घरबाहिर निस्केकी उनी अबेरसम्म नफर्किएपछि आफन्तले गाउँदेखि बजारसम्म खोजी गरे । राजधानीसम्मै पुगेर खोज्दा पनि नभेटिएपछि प्रहरीमा सूचना दिएको उनकी दिदी ज्ञानुले बताइएन् । आज मारिसकेको छैनौ अझै खोजी जारी राखेका छौँ । केही खबर नगरी कहाँ गईन् थाहा छैन, उनले भनिन् ।
बाह्रबिसे नगरपालिकामा मात्रै २०७४ साउनदेखि हालसम्म ३० किशोरी हराएको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो दिनमा किशोरी हराउने क्रम बढेको छ । यो वर्षमात्रै किशोरी हराएका १२ वटा निवेदन परे । त्यसमा ५ जनालाई फेला पार्यौँ, माइती नेपालकी जिल्ला संयोजक पवित्रा घिमिरेले भनिन्, भूकम्पपछि ११ देखि २४ वर्षका ३८ किशोरी गायब छन् । तीमध्ये १३ जनाको मात्रै उद्धार गर्न सकेको उनले बताइन् ।
увеличение продажтелеграмоптимизация и продвижение сайтовступени образованияgo russiaпудинг это